तीन बर्षमै ढल्यो ओलीको दुई तिहाईको सरकार | Axiskhabar
तीन बर्षमै ढल्यो ओलीको दुई तिहाईको सरकार
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत गुमाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त भएका छन् । प्रतिनिधिसभाबाट आवश्यक पर्ने विश्वासको मत नपाएपछि सोमबारदेखि प्रधानमन्त्री ओली स्वतः पदमुक्त बनेका हुन् । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पुस्ट्याइँका लागि भएको मतदानमा हुन्छ भन्ने पक्षमा ९३ मत मात्रै पाए । प्रधानमन्त्रीको आफूप्रति विश्वास छ भन्ने प्रस्ताव पारित हुन हाल कायम रहेको २७१ सदस्यको बहुमत अर्थात् १३६ मत गर्न आवश्यक हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको विपक्षमा १२४ मत खसेको छ ।
सोमबार प्रतिनिधिसभामा भएको मतदानमा २३२ सांसदहरु सहभागी थिए । तीमध्ये १५ सांसदहरु तटस्थ बसेका थिए । एमालेको माधव नेपाल पक्षका सांसद अनुपस्थित रहे । त्यस्तै राप्रपा सांसद राजेन्द्र लिङ्देन पनि अनुपस्थित रहे । प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने स्पष्ट गर्न आवश्यक ठानेकाले सोही प्रयोजनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबारका लागि संसदको विशेष अधिवेशन बोलाएकी हुन् । आजको अधिवेशनको प्रारम्भमै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आव्हानसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाएका थिए । त्यसलगत्तै सभामुखका प्रस्तावमा बैठक सञ्चालन गर्ने सांसद सम्मिलित अध्यक्ष मण्डल बनाएर सभामुखले १५ मिनेट बैठक स्थगित गरे ।
Previous articleझरेका आँप खुवाउन लाग्नु भएको होर प्रधानमन्त्री ज्यु ?
Next articleकाम चलाउ प्रधानमन्त्रीद्धारा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनको अन्त्य
प्रधानन्यायाधीशसँगै ४ न्यायाधीशहरुलाई पनि महाभियोग लगाउने एमालेको तयारी !
कक्षा ११ र १२ मा ‘डी प्लस’ ल्याउने विद्यार्थीलाई मात्र प्रमाणपत्र पाउने
बागमती प्रदेश सभापतिमा जितेपछि बानियाँले भने, ओलीको डन शैलीलाई परास्त परास्त गर्छु
म्यानमारको सेनाले प्रदर्शनकारीमाथि चलायो ट्रक पाँचको मृ्त्यु, दर्जनौं घाइते